हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। नेपाल सुपर लिग अन्तर्गतको पहिलो खेलमा काठामनडौ रेजर्सद्वारा ललितपुर सिटि फुटबल क्लब पराजित !
६६ औ मिनेटमा मेसौकी ओलौमोउले काठमाण्डौका लागि गोल गर्दै १-० को महत्वपुर्ण अग्रता दिलाएका थिए। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा दुवै टोलि : काठ्माण्डौ रेजर्स र ललितपुर सिटी फुटबल क्लबले बराबरी मौका पाएपनि, एक बाहेक अरु धेरै मौकालाइ गोलमा परिणत गर्न नसक्दा खेल १-० मा टूङ्गिन पुगेको हो।
यस्ता छन् सुपर लिगका टोलि र खेलाडिहरु
काठमाण्डौ रेजर्सका कप्तान तथा गोलकिपर विकेश कुथुले खेलको अन्तिम केहि मिनेटमा निकै आकर्षक र महत्वपुर्ण बचाउ हरु गरेका थिए। अन्जन बिष्टको लगातार प्रयासलाइ उनले गोलमा परिणत हुन दिएनन। ललितपुर सिटी फुटबल क्लबको कप्तानी भने अन्जन बिष्टले गर्नेछन।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो र पहिलो फ्रेंचैसे लिग “नेपाल सुपर लिग”को यस पहिलो सिजनमा ७ टोलिहरुको सहभागिता रहने छ।
Posted in गृहपृष्ठ, नेपाल सुपर कप, फुटबल, मुख्य खबरTagged #kathmandu rayzrs #lalitpur city fc #nepal super league 2021 #nsl 2021 #नेपाल सुपर लिग
जडेजाले बेङ्ग्लोर बिरुद्द अन्तिम ओभरमा बनाए ३७ रन !!!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स | टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको चेन्नाइ सुपर किङ्ग्सले रोयल च्यालेन्ज्र बेङ्ग्लोरको सामु १९२ रनको बिजयी लक्ष्य पेस गरेको छ। चेन्नाइका लागि ओपनर फाफ डुप्लेसिसले ५० र रबिन्द्र जडेजाले ६२ रनको दमदार पारी खेले। १९ औ ओभरमा मात्र १५४ रनसम्म पुगेको चेन्नाइले २० ओभर सकिदा […]
जर्मन बुन्डेसलिगा: बायर्न म्युनिखद्वारा बायर लिभरकुसेन भारि अन्तरले पराजित
नेमारद्वारा पेरिस सेन्ट-जर्मेन छाड्न अस्विकार
एएफसि कप : मछिन्द्र र ब्लु स्टार आज भिड्दै
राल्फ राग्निक म्यान्चेस्टर युनाईटेडको अन्तरिम प्रशिक्षक बन्ने